Diyaarado Dagaal oo Dad shacab ah ku Xasuuqay Deegaanka Bariire – Daily Som
Diyaarado Dagaal oo Dad shacab ah ku Xasuuqay Deegaanka Bariire
Wararka ka imaanaya Gobalka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay ay duqayn Balaaran ka dhacday Deegaanka Bariire ee Gobalka Shabellaha Hoose waxaana Duqayntaas Fuliyay Ciidamo Cadaan ah oo loo malaynayo American iyo Ciidamada Sida gaarka ah utabaran ee Danab.
Duqaynta kahor aya waxaa deegaanka ka dhacay Sahmin Mudo qaadatay iyaga oo markii dambe la duqeeyay deegaanka waxaa sidoo kale la sheegay in meesha lagu laayay Dad Beeralay ah oo Khudaar ka falanayay Gobalka.
Sida aan warka ku helnay waxaa la dilay ugu yaraan 7 qof oo Khudaarley ah oo meel wada fadhiyay, waxaana sahminta ku arkay diyaaradaha Maraykanka kuwaas oo wada toogtay, dadka ayaa meel qura wada Fadhiyay waxa ay maqleen guuxa Diyaaradaha waxa ayna isku dayeen in ay ka baxsadaan diyaarada, balse Ciidamo saarnaa Diyaaradaha ayaa mid mid u toogtay.
Dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegay in xalay ka carareen Guryahooda Saakayne ay arkeen maydad Fara badan kuwaas oo ay toogteen Ciidamada Weerarka Soo qaaday.
“Wallaalow xalay habeen barkii anagoo jiifna ayaan halmar maqalnay jug iyo guux diyaaradeed, dadka qaar cabsi darteed guryahooda ayay ka carareen, Wallaahi saakay waxaan araknay meydadka dadka qaar oo shacab ahaa, waxaan maqalnay in Diyaaradaha ay wateen dad nool.” Ayuu yiri .
Ugu dambayn Ciidamada Weerarka soo qaday ayaa weerar ku qaaday Xarumo ay leeyihiin alshabaab oo ku yaala deeganka sida aa ka soo xiganay ilo xog ogaal ah, iyada oo howlgalka uu ka dhashay khasaare kala duwan, balse ragga qaarkood ee halkaasi ku sugnaa ay ka carareen markii ay heleen xogta ah in lagu soo wajahan yahay.
Diyaarado Dagaal oo Dad shacab ah ku Xasuuqay Deegaanka Bariire added by Staff on May 10, 2018